Maitiro ekubhowa iyo Mac mune yakachengeteka mode | Ndinobva mac
Maitiro eBoot Mac yako muKachengeteka Mode yeTroubleshooting
Jordi Gimenez | | Mac Os X, Mac makomputa, Tutorials
Imwe yesarudzo dzatinofanira kutanga Mac yedu uye kutarisa zvinokwanisika software kuidzivirira kumhanya kana kungoita cheki yemuchina wedu padambudziko, ndiyo Safe Boot kana Safe Mode.
Kuti tiite iri basa isu tinofanirwa kuteedzera nhanho shoma panguva yekutanga kwemuchina wedu uye izvi kunyangwe zvingaite kunge zvakaomarara, hazvisi. Nhasi tichaona imwe neimwe uye zvakajeka matanho kuitira kuti utange Mac yako nenzira yakachengeteka ku gadzirisa iyo inogona kukanganisa kana iwe uine dambudziko.
1 Chii chaizvo chinoita nzira yakachengeteka inoita
2 Bhatisa muSafe Mode
3 Zvimiro zvisingawanikwe mune yakachengeteka nzira
Chii chaizvo chinoita nzira yakachengeteka inoita
Chinhu chekutanga chinoitwa neMac yedu patinotanga muodhi yakachengeteka kutarisa bhuti disk uye edza kugadzirisa madhairekitori. Paunotanga Mac nenzira iyi, muchina unoremedza chete ekutanga kernel zvinowedzera, zvinodzima mafonti atakatakudza muMac yedu uye zvinhu zvebhutsu uye zvinhu zvekupinda hazvivhure panguva yebhuti uye kutanga.
Sezvo zve OS X 10.4 font maficha akachengetwa mu / Raibhurari/Caches/com.apple.ATS/uid/ vanoendeswa kuTrash (iko uid nhamba yeID yekushandisa) uye muOS X v10.3.9 kana shanduro dzekare, nzira yakachengeteka inovhura chete bhuti zvinhu zvakaiswa naApple Izvi zvinhu zvinowanzo kuwanikwa mu / Raibhurari / StartupItems. Izvi zvinhu zvakasiyana neakaunti zvinhu zvekutora zvinhu zvakasarudzwa nemushandisi.
Bhatisa muSafe Mode
Iyo yakachengeteka modhi bhuti maitiro ari nyore kwazvo uye kune izvi isu tinongofanirwa kutevedzera matanho aya. Yokutanga uye inonyanya kukosha ndeye bvisa Mac yedu. Kana Mac yangodzima tinokwanisa kutanga maitiro uye izvi ngatitangezve iyo Mac.
Apo isu tichitanga Mac uye nguva mushure mekunzwa hunhu hwekutanga kurira, tinodzvanya iyo Shift kiyi. Uku pulsation kwakakosha kuita panguva iyo yekutanga-kumusoro kurira kurira, tikazviita zvisati zvashanda. Kana Apple logo yaonekwa, iyo the, tinomira kutsikirira.
Zvakajairika kana mushure meichi chiitiko Mac yedu zvinotora chinguva chidiki kuvhura iyo skrini yekumba, usaore moyo uye uve nemoyo murefu semuchina unoita dhairekitori rekutarisa sechikamu cheiyo yakachengeteka nzira uye ndosaka zvichitora nguva.
Zvimiro zvisingawanikwe mune yakachengeteka nzira
Iwo mabasa anowanikwa paMac yedu kana isu tiri mune yakachengeteka nzira inoderera uye mune ino kesi hatizokwanisa kushandisa DVD player, Iwe haugone kana rongedza vhidhiyo kana rekodhi neMovie kana shandisa odhiyo yekuisa kana zvigadzirwa zvekuburitsa.
Kubatana USB, FireWire, uye Thunderbolt inogona kunge isingawanikwe kana kuti hazvishande kana tiri mune ino modhi uye Wi-Fi network inogona kushomeka kana isingawanikwe zvichienderana neMac uye neshanduro yeOS X yatiri kushandisa. Yakagadziriswa graphical Hardware kumhanyisa, iyo OS X menyu bar haina opaque uye inoremadza kugovera faira.
Kana dambudziko ragadziriswa kana dambudziko raonekwa nebhuti rakachengeteka, tinogona kutangazve muchina neyakajairwa bhuti. Kune izvi isu tinofanirwa chete tangazve Mac yedu pasina kudzvanya chero kiyi. Kana paine chikonzero chero chipi zvacho keyboard isingashande iwe unogona kuwana iyo Terminal uri kure kana kupinda mukati mekombuta kubva kune imwe komputa uchishandisa SSH, asi ichi ndicho chimwe chinyorwa chekuti kana uchida tichazoburitsa mune imwe dzidziso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro eBoot Mac yako muKachengeteka Mode yeTroubleshooting
Mhoro, iwe unoziva kuti hapana chinoitika pandakadzvanya kiyi yaunoti, ini ndine Yosemite, yekupedzisira, inoramba yakanamatira zvakanyanya kana zvishoma pakati pebhawa, kwaziso
Pindura kuna Miguel ngirozi
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ YEBENES akadaro
Izvo zvakafanana zvinoitika kwandiri, wakazvigadzirisa here?
Pindura kuna FRANCISCO JAVIER RAMIREZ YEBENES
Nekuyedza izvi ndakawana nyonganiso, ndakasiiwa ndisina kutanga uye zvakandibhadharira Mwari uye zvinobatsira kupora mac, kana ndichiziva kuti handiyedze kushandisa izvi nenzira yakachengeteka…. Ndakawana mucherechedzo wedenderedzwa nemuchinjikwa pakati uye hauna kutanga kana chero chinhu, ipapo wakagara, kana kushandisa kopi yenguva muchina waive, waingoshanda chete kubva pakupora kupatsanura kudzoreredza iyo OSX uye yega yakasarudzika ndeye kuti Dhairekodhi dhairekitori rava kunzi kurodha pasi uye handina mabhora ekuchinja zita, zvakapusa, asi zvinondishungurudza kuti nekuyedza izvi ndakapedza mazuva maviri ndisina komputa ... Kana mumwe munhu achizoedza, ini handitombozviita ...
Pindura kuna shiryu222
Mhoro shiryu222, chimwe chinhu muchiitiko ichi hachikushandire iwe nekuti patinoita dzidziso yerudzi urwu tinoedza kare kuti haina kana dambudziko. Mune yangu kesi iMac, hapana dambudziko rakaonekwa uye kungotonga muchina kwakatanga pasina dambudziko.
Ndine urombo nezvakaitika kwauri, asi zvinoshamisa nekuti chinhu chega chinoitwa nemaitiro aya kutarisa mashandiro akanaka emuchina uye haubate chero kumisikidzwa kana zvakafanana.
Zvakadii, ndine dambudziko rakakomba pane yangu imac, ndakaedza kumisikidza iyo svutugadzike uye yakatangazve pakati pekumisikidza, dps yaiita kunge inoshanda zvakaringana asi mushure mechinguva kubatana kwese kwakatemwa, bluetoth, usbe, internet, Zvese, kubva ipapo ndakaedza kuzvitanga zvikazowedzera, ndanga ndisina mbeva kana keyboard (zvinoita sekunge haisiyo nyaya, ndanga ndave nemoyo murefu uye ndinokutendai!), mushure mekuyedza kwakawanda uye kuyedza yakachengeteka modhi chete kiyi iyo muchina wakagamuchirwa yaive «utility yediski» rairo + r, uye ipapo ini ndakaongorora nekugadzirisa dhisiki asi tbn yakakanda chikanganiso, kubvira panguva iyoyo muchina wangu haugone kutanga, unouya kuzotakura uye kudzima, ingo tenderera mukati disk utility mode uye kubva ipapo HD inoita kunge yakavharirwa nekudzoreredza x internet yosemite, ndoitei? Ndapererwa handikwanise kana backup mafaera angu ekushandisa! Pane imwezve nzira yekupinda mumamiriro akachengeteka? iyo ine «yekumusoro» kiyi haishande kwandiri, ndine hurombo nekuzvitambanudza, handizive zvakawanda nezve maforamu. Ndatenda!
Pindura kuna Lefo
Zvakanaka, kuongorora zvishoma, izvi zvinogona kunge zvakaitika kwandiri nekuti ndine isina-apuro ssd ine activation yetrimu neyechitatu-bato chirongwa, uye zvinogona kunge iko kext kusaina kuchaitwa uye kana uchitanga haizoregi diski iverengerwe, saka handizive kana ini Unogona kusimbisa izvozvo uye kana zvirizvo, zvingave zvakanaka kana iwe ukaratidza mune imwe posvo kana mune ino kuchichinja kuitira kuti vanhu vakambomira vasati vaita izvi vazvimise kuti vadzivise zvakanyanya zvakaipa, izvo kwandiri ini ndaigona kuzvigadzirisa pachangu kunyangwe ini ndisati ndanyatsoziva munyika mac uye ndosaka ndichitevera ino webhusaiti uye pane imwe foramu.
Uye kana zvandakataura kare zvingave zvakakugumbura, ndinokumbira ruregerero.
Judith Rivas akadaro
Mhoro: Uye ndinobuda sei mumamiriro akachengeteka nemirairo. Kubva nezuro Macpro yangu yakagadziriswa mune yakachengeteka modhi asi haina kupedzisa kutanga, yekufambira mberi bhawa inotora nguva yakareba uye kana ichizadza, haina kupfuura ipapo. Ini ndaida kudzorera asi ndiri safe mode hapana internet yekubatanidza kuzviita. Kuda akasara ari safe mode limbo.
Pindura kuna Judith Rivas
Apple Inoburitsa OS X 10.10.5 Veruzhinji Beta
Gadziridza iyo firmware yeMac yako mini kubva kunopera 2012